Palmyra, fahagagana amin'ny tany efitra Syriana | Vaovao momba ny dia
Palmyra, fahagagana amin'ny tany efitra Syriana
Enric Gili | | General, Inona no ho hita, Syria
Androany dia holazaiko anao ny iray amin'ireo làlana mahaliana indrindra nataoko, Palmyra. Fitsangatsanganana iray izay azo heverina ho hafakely ary tsy azo atao izao amin'izao fotoana izao noho ny fanafihan'ny mpampihorohoro hatrany any an-toerana. Izy io dia momba ny tanànan'ny Palmyra fahiny, rava arkeolojika manaitra any amin'ny tany efitra syriana.
I Palmyra dia nambara ho toy ny vakoka manerantany tamin'ny 1980. Any afovoan-tany efitra sy akaikin'ny oasis no misy azy sisa tavela amin'ny arkeolojika manan-danja izay mbola voatahiry na eo aza ny fanafihana ataon'ny DAESH (Fanjakana Islamika) ary taratry ny kolontsaina sy ny fotoana rehetra nonina ny faritra nandritra ny taonjato maro.
Ny fikarohana arkeolojika sasany dia manoratra ny nananganana ny tanàna manodidina ny Arivo Taona faharoa BC ary tavela avy amin'ny Neolithic no hita.
Talohan'ny ady an-trano sy ny ISIS, Palmyra no iray amin'ireo toerana tsara indrindra tany Moyen Orient sy Syria.
1 Ahoana no ahatongavana any Palmyra?
2 Inona no hatao any Palmyra?
Ahoana no ahatongavana any Palmyra?
Azo antoka fa ny fanontaniana voalohany dia tokony hoe "Azo atao ve ny mandeha any Palmyra dieny izao?" ary TSIA ny valiny. Ny tsara indrindra dia ny mitsidika azy rehefa misy fandriampahalemana any amin'ny faritra.
Na izany aza, hahazoana an'i Palmyra dia azo atao ihany ny manao azy amin'ny làlana, amin'ny fiara na bus. Misy lalana mampitohy ny renivohitr'i Syria Damasy miaraka amin'i Palmyra, eo amin'ny 220Km eo ho eo ary 4 ora eo ho eo ny dia. Tsy fantatro ny vidin'ny fanaovana dia amin'ny taxi, tsy maintsy mihetsiketsika foana ianao.
Na eo aza ny toerana fizahan-tany manan-danja indrindra ao amin'ny firenena, I Manoro hevitra anao ny mandeha miaraka amin'ny masoivoho sy mpitari-dalana iray, lava ny halavirana ary amin'ny teny Arabo ny ankamaroan'ny afisy.. Misy hotely maromaro hijanona ao.
Ny trano fandraisam-bahiny tsara indrindra dia ny tranoben'ny Zenobia Cham, tokana eo anoloana ireo korontam-bato ary natsangana tamin'ny 1930 nataon'ny eropeana sasany, Countess Marga D'Andurain sy i Pierre mpiara-miasa aminy. Hotely manintona, vidiny azo ekena, fitsaboana marina ary tantara mendrika ny tantara tsara indrindra. Any no ahitanao ny antony.
Inona no hatao any Palmyra?
Any ireo rava eo akaikin'ny tanàna maoderina miaraka amin'ny anarana mitovy ihany ary manana fanitarana be dia be izy ireo. Ny ankamaroan'izy ireo dia azo tsidihina an-tongotra, saingy misy rava (tilikambo fandevenana) miorina amin'ny toerana avo na lavitra izay mitaky fiara hahatongavana any.
Palmyra dia tsy miavaka amin'ny zavatra iray manokana, no napetraka rehetra. Ny tanàna iray manontolo dia voatahiry tsara nandritra ny taonjato maro nananganana azy, ireo ady, fanafihana ary fotoana niainany.
Manoro hevitra anao aho handao ny hotely aloha be ary manomboka mandeha mamaky ny sisa tavela amin'ny arkeolojika. Amin'ny fahavaratra dia mety mahatratra 40ºC ny mari-pana, mitondra rano sy akanjo mampahazo aina handeha. Tsidiho ny tanàna taloha iray manontolo amin'ny maraina ary amin'ny mitataovovonana na amin'ny tolakandro dia mankanesa any amin'ny Lohasahan'ny Fasana. Raha manam-potoana ianao, dia handeha hitsangatsangana amin'ny tanànan'ny Palmyra maoderina koa aho.
Izany dia nilaza fa tsy afaka miala amin'i Palmyra isika raha tsy mahita ireto manaraka ireto:
Tempolin'i Bel (na Bala): ny fotoana niova ho fiangonana natokana ho an'ny fivavahana tamin'i Bel, andriamanitra faratampon'i Mesopotamia, ary natsangana tamin'ny taona 32 TK Noravan'i DAESH izy io. Talohan'ny fanafihana dia noheverina ho tempoly voatahiry tsara indrindra any Palmyra izy io. Izy ireo izao no manamboatra azy io indray.
Tempolin'i Baalshamin, Nabu, Al-lat ary Bala-Hamon, koa miorina ao an-tanàna ary naorina teo anelanelan'ny taonjato voalohany sy faha-XNUMX taorinan'i Kristy.
Axis lehibe an'ny tanàna: colonnade mahatalanjona mihoatra ny 1km izy izay nanjary arabe malalaky ny Palmyra tamin'ny taonjato faha-2 taorian'i JK ary nampiasain'ny mponina, ny mpivarotra ary ny hafa. Izy io tokoa no sary malaza an'ity tanàna ity manerantany.
Teatra romana: izy dia iray amin'ireo teatra romana voatahiry tsara indrindra manerantany. Naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX taorian'i JK, fony i Palmyra dia teo ambanin'ny fanjakan'ny Romanina.
Lohasahan'ny fasana: kilometatra vitsivitsy miala ny tanàna taloha sy akaikin'ny tendrombohitra misy tilikambo fandevenana maromaro mitsangana. Ny iray amin'izy ireo dia ny tilikambo Elahbel, nanomboka tamin'ny taonjato XNUMX taorian'i Kristy, ary amin'ny toerana fitahirizana tonga lafatra. Azonao atao ny mitsidika ny atiny ary mahita ny maritrano sy sary hosodoko manaitra.
Raha vao miverina ny fandriam-pahalemana any Syria, I Manoro hevitra anao aho handeha any Palmyra tsy misy isalasalana.
Soa ihany aho fa afaka nitsidika azy antsasaky ny taona talohan'ny nanombohan'ny ady an-trano. Tamin'izany fotoana izany dia toa nisokatra ho an'izao tontolo izao ny firenena, orinasa maro tandrefana no nanomboka nanana ny toerany tany Syria. Nahatonga ahy hahatsapa fa faly ny olona amin'ny ankapobeny amin'ny toe-draharaha eto amin'ny firenena ary tian'izy ireo ny fitsidihan'ny fizahan-tany azy io. Mazava fa lasa niaraka tamin'ny fahatsapana izay tsy nifanaraka tamin'ny zava-misy aho.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Inona no ho hita » Palmyra, fahagagana amin'ny tany efitra Syriana
Panda Bear: eo anelanelan'ny fitiavana sy ny fampihorohoroana
Ny toerana fizahan-tany tsara indrindra any Benidorm